Ị nwere ike inyere m aka inweta uru SEO nke backlinks kọwara?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị leba anya na kọntaktị bụ isi banyere backlinks na SEO. Ị kwesịrị ịmara usoro okwu ndị a gbasara njikọta njikọ onwe ha na usoro njikọ njikọ na ọnụ ọgụgụ. Ka anyị leba anya site na isi ihe banyere backlinks kọwara na isi nkọwa - free cool logo.
Ihe kachasị mkpa banyere azụ azụ akọwapụtara
Njikọ Njikọ - na-anọchite anya atụmatụ zuru ezu,. Njikọ njikọ bụ "ike," "uru," na "ikike" nke njikọ na-agafe site n'otu ibe weebụ gaa na ọzọ. A na-eji okwu a mee ihe iji zoo akara azụ azụ na àgwà DoFollow tinye na koodu HTML. A na-echekarị ụdị backlinks dị otú ahụ iji nyefee ma ọ bụ weghaa otu n'ime njikọ ọnụọgụ weebụ kachasị mkpa a maara dịka PageRank score.
Backlinks na DoFollow
njikọ DoFollow - bụ naanị ụdị backlinks ga-eji maka nzube SEO. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ike dị ike nke backlinks na DoFollow na-emegharị na ha nwere ike ịfe Njikọ Njikọ. Njikọ ndị a na-arụ ọrụ maka indexing - M pụtara na ha na-enyere aka na-achọgharị bọtịnụ na-asọgharị site na ngalaba na ibe nke saịtị gị ma ọ bụ blog. N'otu oge ahụ, backlinks na DoFollow na-enye ụzọ mpụga na-arụtụ aka na ebe ndị na-aga ebe ọzọ na Web. Ọ pụtara na onye ọ bụla na-ebi ndụ na-ekwe ka "soro" ụzọ nke njikọ dị otú ahụ.
Backlinks na NoFollow
NoFollow backlinks nwere ike ịkọwa ụdị njikọ ndị ọzọ, Otú ọ dị, inwe ihe dị arọ ma ọ bụ mmetụta na SEO. N'ikwekọ na mkpado NoFollow, njikọ ndị a enweghị ike ịfe Njikọ Njikọ. N'ihi ya, ha enweghi mmetụta ọ bụla na ọnọdụ ọkwa. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji njikọ NoFollow ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ njikọ na mpụga na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog zuru ezu. Ka o sina dị, ha ka dị irè maka nhazi indexing kachasị mma, ha nwere ike inyere gị aka ịmepụta ọkwa dịgasị iche iche nke njikọ dị iche iche na ike na nzube. Na iche iche iche bụ ihe kacha baa uru nke njikọta njikọ gị. Ekwuru m na ihe mgbaàmà a dị oke mkpa iji cheta Google mgbe ọ na-abịa inye ọdịiche ogo ọrụ ọchụchọ.
Nke a na ụdị nke backlinks nwere ike ịkọwa dị ka njikọ dị ala na-ejikarị eme mgbalị iji bulie ọnọdụ ogo ọchụchọ ugbu a na ọnụahịa niile. Ekwuru m na ịkụ nzọ na spammy, na-abaghị uru ma ọ bụ ọbụna ebe iwu na-akwadoghị, njikọ ndị a nwere ike imerụ mbọ gị niile SEO, karịa inye ezigbo mma. Ọ bụ ya mere a ga-eji dọọ gị aka ná ntị ma zere njikọ ndị dị ala na-ejikarị n'ụgbọ ụkwụ njikọta (njikọ njikọta), PBN (netwọk netwọk nzuzo), ma ọ bụ ndị na-enyeghị onyinye maka ọdịiche dị ka ụgwọ maka ire ere.
Njikọ dị n'ime
A na-eji ụdị ụlọ njikọ a mee ntọala siri ike iji mee njem na ebe nrụọrụ weebụ, na-enye aka n'inwekwu ọganihu ma nwekwuo ahụmahụ nchọgharị. Njikọ dị n'ime ya na-enyefe akụkụ ahụ n'ime otu ngalaba ahụ - na-eme ka ọ dị mfe ịnyagharịa site na ngalaba dị iche iche na ibe ndị metụtara ya n'ime mkpokọta ma ọ bụ blog. Ma, rịba ama na usoro ezi uche dị mma bụ ihe mgbaàmà nke nwere ike ịmepụta, nke nwere ike inye aka na ọkwa dị elu dị elu karịa na ọ dịkarịa ala.